ဓမ္မနဒီ: ပိဋကတ်သုံးပုံကိုReconfirm ပြုလုပ်တာကို သင်္ဂါယနာ တင်တယ်ခေါ်တယ်
ပိဋကတ်သုံးပုံကိုReconfirm ပြုလုပ်တာကို သင်္ဂါယနာ တင်တယ်ခေါ်တယ်
ပိဋကတ်သုံးပုံကိုReconfirm ပြုလုပ်တာကို သင်္ဂါယနာ တင်တယ်ခေါ်တယ်။
ထေရ၀ါဒဆိုတာ နှစ်ပေါင်း၂၆၀၀ အတွင်းဘာမှပြောင်းလဲမှု မရှိပဲနဲ့မူရင်းအတိုင်းထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ဓမ္မကို ထေရ၀ါဒဓမ္မ ခေါ်တယ်။
ပထမအဓိပ္ပါယ်က မူလ ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာ Idea အသစ်တွေဘာမှမထည့်ဘူး။
နောက်ဒုတိယအဓိပ္ပါယ်က ပိဋကတ် သုံးပုံက မူရင်းအဆုံးအမတွေ ဘာမှနှုတ်မပစ်ဘူး။ဘာမှ ထုတ်ပယ်မပစ်ဘူး။
နောက်တတိယအဓိပ္ပါယ်က အစားထိုးပြောင်းလဲတဲ့အနေနဲ့ အသစ်ပြန်ရေးတာ ဘာမှမရှိဘူး။ အဲဒီ အချက်သုံးချက်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မကို ထေရ၀ါဒဓမ္မ ခေါ်တယ်။
ထေရ၀ါဒအသင်းကိုတည်ထောင်တဲ့သူတွေဟာ ထေရ၀ါဒအကြောင်းကိုနားလည်ထား ဘို့လိုလိမ့် မယ်။ ထေရ၀ါဒဆိုတာဘာလဲလို့ မေးလာတဲ့အခါ ဘာမှမသိရင်တော့ မဖြစ်သေးဘူး။
ထေရ ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကမထေရ်ကြီး တွေကို ထေရခေါ်တယ်၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့၊ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်တို့၊ ရှင်မဟာကဿပတို့စတဲ့ ဘုရားထံမှာ ရဟန်းဖြစ်ကြတဲ့၊ဘုရားလက်ထက်က ရဟန္တာမထေရ်ကြီး တွေကို ထေရလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီ ထေရ တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုခေါ်တယ်။
နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကာလအတွင်းမှာ (၆)ကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်ပြီြး ပီ၊ (၆)ကြိမ်လုံးလုံးဘာလုပ်သလဲဆိုရင် အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်သုံးခုနဲ့ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံကိုReconfirm ပြုလုပ်တာကို သင်္ဂါယနာ တင်တယ်ခေါ်တယ်။
ပထမသင်္ဂါယနာကို ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက် သုံးလအကြာ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဘာရတောင်စောင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းက အဇာတသတ်မင်းကြီး။သူက Sponsor ပေးတယ်ပေါ့။အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ သံဃမဟာနာယက ကတော့ မဟာကဿပ။President သူ တစ်ပါးတည်းလုပ်သွားတယ်။ရှင်အာနန္ဒာတို့ ရှင်ဥပါလိတို့က General Secretary တွေလုပ်သွားကြတယ်။အဲဒီမှာ ဘုရား (၄၅)နှစ်လုံးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေ ကို အကြောင်းအားလျော်စွာ ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာမျိုးစုံဟာ မှာ ပြန့်ကျဲပြီးတော့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။အဲဒါတွေကို Systematically organized and compiled. အမျိုးတူရာတူရာ ပေါင်းစပ်သွားတာပါပဲ။
(၄၅) နှစ်အတွင်းမှာ မြတ်စွာဘုရားသီတင်းသုံးသွားတာ (၁၄) နေရာရှိတယ်။အဲဒီနေရာတွေမှာ ၀ါဆို ၀ါကပ်တော်မူပြီး နေရာအနှံ့ လူမျိုးစုံကို တရားတွေဟောတော်မူခဲ့တာ။ တရားတွေဟာ ပြန့်ကျဲပြီးတော့ကျန်ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကိုစုဆောင်းပြီး သုတ္တန်ကို ဘယ်မှာဟောတယ်၊ ၀ိနည်းကိုဘယ်မှာဟောတယ်၊ အဘိဓမ္မာကို ဘယ်မှာဟောတယ်၊ဘယ်သူ့ကိုဟောတယ်၊ ဘယ်လိုဟောတယ် စသဖြင့် အကန့်လိုက် အကန့်လိုက် လုပ်တာကို သင်္ဂါယနာတင်တယ်ခေါ်တာပဲ။ပထမအကြိမ် လုပ်ပြီးတော့ နောက်ငါးကြိမ်က ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် Reconfirm (သင်္ဂါယနာတင်) ပြန်လုပ်တာ။
အဲဒီတော့ ထေရ၀ါဒဓမ္မ အသင်းသားတွေဟာ ထေရ၀ါဒဆိုတာ ဘာလဲလို့သိရအောင်ဒီကနေ့ အကျဉ်းလေးပြောပြခဲ့တာ။ အဲဒါ မှတ်သားထားကြ။“ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကာလက ဗုဒ္ဓထံမှာ ရဟန်းဖြစ်ကြသော တပည့်ကြီးများ၏မူဝါဒစနစ်ကို ထေရ၀ါဒ ခေါ်တယ်” အဲဒီမူဝါဒစနစ်ဟာဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန် စံပြီးတဲ့နောက် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာ ၁။ အသစ်ဘာမှ မထည့်စတမ်း။ ၂။ အဟောင်းတွေ ဘာမှ ထုတ်မပစ်စတမ်း။၃။ ပြောင်းလဲခြင်းဘာမှ မလုပ်စတမ်း။ ကြည့်ပါလား သင်္ကန်းတောင်မှ တိဘက်သင်္ကန်းကတစ်မျိုး၊ တရုပ်သင်္ကန်းကတစ်မျိုး၊ မွန်ဂိုးလီးယားကတစ်မျိုး၊ ကိုးရီးယားကတစ်မျိုး၊ဂျပန်ကတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် မဟာယာနတွေ။ထေရ၀ါဒကဒီတမျိုးတည်းပဲ ဒီပုံစံပဲ။ ထေရ၀ါဒဆိုတာ အဲဒါပါပဲ။Originally maintenance teaching of the Lord Buddha.
ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံက လာရောက်ကြတဲ့တပည်တွေ ထေရ၀ါဒမူကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ကို တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထေရ၀ါဒIdea လေးတော့ ခေါင်းထဲထည့်ထားကြ။ဗမာ့မူ ဗမာ့စနစ်ကို ဒို့ပြင်မပစ်ဘူး၊ပြောင်းမပစ်ဘူး၊ဖျက်သိမ်းမပစ်ဘူး၊ ဒါလေးတော့ ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်ကြ။
ပိဋကတ်သုံးပုံကိုReconfirm ပြုလုပ်တာကို သင်္ဂါယနာ တင်...
ဘုရားရှိခိုးရခြင်း ၏အကြောင်းရင်းနှင့်ဘာသာရေး ဗဟုသ...
အရိပ်သာခို၍ အပွင့်မပန် အသီးမစားကြသူများ
၀ိနည်းကိုလိုက်နာလျှင် ရရှိမည့်အကျိုး(၁၀) ပါး။
လောကတွင် အကဲ့ရဲ့မခံရသူဆိုတာ မရှိ